Yiziphi izinzuzo zegama lekhiye eliyisihluthulelo se-Amazon?
Iningi labathengisi be-intanethi balahlekelwa ukuthengisa kwabo futhi liholele ngenxa yomncintiswano ophezulu. Akulula ukubikezela isimo esinjalo okungenani awulandeli ngokuqhubekayo izikhundla zakho zegama elingukhiye. Yiqiniso ukwenza lo mcwaningi ngesandla kungaba nzima futhi isikhathi esiningi. Ngenhlanhla, kunezinhlobo ezahlukene zegama elingukhiye lama-Amazon we-tracker amathuluzi atholakala kuwebhu.
Kulesi sihloko sizoxoxa ukuthi singanqoba kanjani ezinye izinkinga eziyisisekelo abathengisi base-Amazon ngokuvamile babhekana nomkhuba wabo futhi babelane nawe ngamanye amaqhinga kanye nezinto ezidingekayo zokuthuthukisa ukuthengiswa komkhiqizo wakho.
Ake siqale sixoxe ngokuthi i-Amazon A9 algorithm isebenza kanjani - pannelli per riscaldamento da pavimento online. Ukuqonda indlela yalezi zindlela zokusebenza kuzosisiza ukuba sakhe umkhankaso wokwenza ama-Amazon wokunqoba nokuphakamisa izinga lemikhiqizo.
Ukusebenza kwe-Amazon kusebenza kanjani?
Ama-algorithm e-Amazon A3 afana kakhulu nama-algorithms asezingeni eliphezulu le-Google. Noma kunjalo, kusekhona ukungezwani. Ngesikhathi i-Google igxile kumakhasi ewebhu, ama-Amazon enza ukugcizelela imikhiqizo. Ngokusho kwedatha yemininingwane, uma kuziwa ocwaningweni lomkhiqizo, abasebenzisi babheka ukucinga kwe-Amazon kunokuba usesho lwe-Google. Kungachazwa ngokufakwa kuhlu komkhiqizo etholakalayo nokwaziswa okugcwele mayelana nemikhiqizo. Ngaphezu kwalokho, lapha ungakwazi ukuqhathanisa amanani bese uhlola ukubuyekezwa mayelana nomkhiqizo oyikhethayo. Abasebenzisi akudingeki bapheqele kakhulu ngokusesho kwe-Google. Lonke ulwazi mayelana nomkhiqizo lubekwe ekhasini elilodwa. Imiphumela yosesho lwe-Amazon iqhutshwa kakhulu ngumthengi amathuba okuthenga imikhiqizo eveziwe.
ama-Amazon acabangela inani lezici ukunquma isikhundla semikhiqizo:
Ukuthandwa kwemikhiqizo phakathi kwabathengi;
Yiziphi imikhiqizo enezinga eliphezulu lokuguqulwa;
Yimiphi imikhiqizo ehlinzeka ngokuthenga okungcono kakhulu;
Yeka ukuthi imikhiqizo efanele kumbuzo wosesho.
Indlela yokukala i-rank yakho ku-Amazon usebenzisa i-keyword ye-Amazon rank tracker?
i-Amazon usezingeni algorithm ngokuyinhloko isekelwe kumazwi angukhiye. Ngakho-ke, ukusebenzisa amagama akho angukhiye ngendlela efanele kuzokusiza ukuthi ubeke izinga eliphezulu futhi udale ithrafikhi ehlosiwe.
Ngosizo lwe-Amazon Keyword Tool ungakwazi ukukhetha amagama angukhiye alungile futhi ulandele izikhundla zabo. Idatha etholakalayo izokusiza ukuthi uqinisekise ukuthi ukhethe amagama afanele okusesho futhi uwasebenzise ezindaweni ezifanele nezisemqoka. Ngaphezu kwalokho, i-tracker i-tracker yezinga le-Amazon izokusiza ukukhipha izincintiswano zakho futhi udonse amakhasimende angaphezu kwamakhasimende akho.
Kunezindlela ezimbili ezikhona zokucwaninga nokulandelela amagama akho angukhiye - manual futhi othomathikhi. Ngenkathi kungenzeka ukuba ngesandla uhlole amagama ngamunye okusesho futhi uchithe isikhathi esiningi ukuhlola ukuthi kuyadingeka yini noma cha, kulula kakhulu ukusebenzisa i-Amazon tracker rank tracker esikhundleni. Ngeli thuluzi elizenzekelayo elizenzekelayo uzosindisa isikhathi sakho futhi uthole idatha efanelekayo futhi enembile kakhulu.
Ungayilandela kanjani amagama angukhiye angukhiye usebenzisa i-Amazon elingukhiye wegama elingukhiye?
Ukusebenzisa leli thuluzi ungathola kalula ukuthi yiliphi lamagama angukhiye ahloswe kahle nokuthi lihlala lini ngemuva kwamncintiswaneni akho. Leli thuluzi likuvumela ukuba ubone ukuthi yimiphi imigomo yokusesha abadlali bakho abayisebenzisayo ukubeka i-Amazon SERP isikhundla nokuthi babeka kahle kangakanani kula magama. Uma unendlela ehlakaniphile emkhankasweni wokuthuthukisa i-Amazon yakho, ungakwazi ukuboleka lawa magama futhi uwasebenzise ngenzuzo yakho. Ngenxa yalokho, izonikeza isisindo kumasu wakho wokukhangisa okuqukethwe.